China resin nkwụnye oghere Microvia Imikpu ọlaọcha HDI na laser mkpọpu ala emepụta na suppliers | Kangna
Resin ịkwụnye oghere Microvia Imikpu ọlaọcha HDI na laser egwu
Typedị ihe: FR4
Layer gụọ: 4
Min oghere size: 0.10mm
Emechara mbadamba osisi: 1.60mm
Solder nkpuchi agba: acha anụnụ anụnụ
Etiti oge: 15 ụbọchị
Site na narị afọ nke 20 ruo na mmalite nke 21st narị afọ, ụlọ ọrụ eletriki sekit na-akụda oge mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ, teknụzụ elektrọnik ejirila ngwa ngwa. Dịka ụlọ ọrụ bọọdụ sekit na-ebipụta, naanị ya na mmepe mmekọrịta ya, nwere ike na-egbo mkpa ndị ahịa mgbe niile. Na obere, ọkụ na mkpa olu nke electronic ngwaahịa, ndị e biri ebi circuit osisi mepụtara mgbanwe osisi, isiike mgbanwe osisi, ìsì lie olulu circuit na na.
Ikwu okwu banyere oghere kpuru ìsì / lie, anyị na-amalite site na multilayer ọdịnala. Ọkọlọtọ multi-oyi akwa circuit osisi Ọdịdị na-emi esịnede n'ime circuit na mpụta circuit, na usoro nke mkpọpu ala na metalization n'ime oghere na-eji nweta ọrụ nke esịtidem njikọ nke ọ bụla oyi akwa circuit. Otú ọ dị, n'ihi mmụba nke njupụta akara, a na-emelite usoro nkwakọ ngwaahịa nke akụkụ mgbe niile. Iji mee ka mpaghara okirikiri sekit ahụ dị obere ma nye ohere maka akụkụ arụmọrụ ka elu na elu, na mgbakwunye na obosara eriri, oghere ahụ agbadala site na 1 mm nke oghere DIP jack to 0.6 mm nke SMD, wee gbadata na-erughị 0.4mm. Agbanyeghị, a ka ga-ebi ebe dị elu, yabụ enwere ike ịme oghere na oghere nwere oghere. Nkọwa nke olulu e liri na oghere kpuru ìsì bụ ndị a:
Oghere ahụ dị n'agbata ọkwa dị n'ime, mgbe ịpịrị, enweghị ike ịhụ ya, yabụ na ọ dịghị mkpa ka ọ nọrọ ebe mpụga, akụkụ elu na nke ala nke oghere ahụ dị n'ime oyi akwa nke bọọdụ ahụ, na okwu ndị ọzọ, lie na mbadamba
Kpuru ìsì oghere:
A na-eji ya maka njikọ dị n'etiti oyi akwa na otu ma ọ bụ karịa n'ime ime. Otu akụkụ nke oghere ahụ dị n'otu akụkụ nke bọọdụ ahụ, mgbe ahụ, oghere ahụ jikọtara ya na mbadamba ahụ.
Uru nke isi kpuru ìsì ma lie:
Na teknụzụ na-enweghị oghere, itinye oghere oghere na olulu nwere ike belata oke PCB, belata ọnụ ọgụgụ nke ọkwa, melite ndọtị electromagnetic, mee ka njirimara nke ngwaahịa elektrọnik, belata ọnụ ahịa, ma mekwaa imewe rụọ ọrụ dị mfe na ngwa ngwa. Na omenala PCB na nhazi na nhazi, site na oghere nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu. Nke mbu, ha nwere otutu oghere di nma. Nke abuo, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke site-oghere na a ok uzo na-akpata oké mgbochi wiring nke n'ime oyi akwa nke multi-oyi akwa PCB. Oghere ndị a nwere oghere dị mkpa maka wiwi, ha na-agabiga elu nke ike na ala oyi akwa, nke ga-ebibi njirimara impedance nke ike ọkọnọ ala waya oyi akwa ma mee ka ọdịda nke ike ọkọnọ ala waya. oyi akwa. Na ot n'ibu mkpọpu ala ga-ugboro 20 dị ukwuu dị ka ojiji nke ndị na-abụghị perforating oghere technology.
Nke gara aga: 6 oyi akwa impedance akara isiike-Flex osisi na stiffener
Osote: 3 oz solder nkpuchi ịkwụnye ENEPIG arọ ọla kọpa